विश्वकपः दक्षिण अफ्रिका र वेस्ट इन्डिज भिड्दै, कस्तो छ विगत? – Everest Dainik – News from Nepal
विश्वकपः दक्षिण अफ्रिका र वेस्ट इन्डिज भिड्दै, कस्तो छ विगत?
काठमाडौं, जेठ २७ । इंग्ल्याण्डमा जारी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको १५ औं खेलमा आज दक्षिण अफ्रिका र वेस्ट इन्डिज भिड्दै छन् । यी दुई टिमबीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो ३ः१५ बजेदेखि साउथह्याटनमा सुरु हुँदैछ । विश्वकपमा खराव लयमा देखिएको दक्षिण अफ्रिका पहिलो जितको खोजिमा छ । यता वेस्ट इन्डिज पनि जीत निकाल्न चाहन्छ ।
अन्तिम पटक २००३ को विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिकालाई हराउन सफल भए पनि त्यसयता भने वेस्ट इन्डिजले अफ्रिकाविरुद्ध जीत निकाल्न सकेको छैन । जारी विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिका तीन खेलमा नै पराजित भएको छ। सेमिफाइनल संभावनालाई कायम राख्न उसले बाँकी ६ खेलमा जित निकाल्नु पर्ने चुनौती छ ।
ट्याग्स: Cricket, South Africa Vs West Indies